Sirni TPL/EPRDF Wayta Ummata Wayyaba gara Lammii Lammaffaatti gadi buusaa Jiru Kanatti, Dhumaatii Isaaniif Haala Aanjesssaa Jira. - Adda Bilisummaa Oromoo | Adda Bilisummaa Oromoo
Home » Oduu » Oduu Gara Garaa » Sirni TPL/EPRDF Wayta Ummata Wayyaba gara Lammii Lammaffaatti gadi buusaa Jiru Kanatti, Dhumaatii Isaaniif Haala Aanjesssaa Jira.
By admin on March 18, 2017.
Dhumaatii Lammiilee Kurna Hedduu Dhaqqabe irratti Ibsa Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii.
Itoophiyaa keessatti haawwan, abbootiin, obbolaan, akaakilee fi firootni ammallee kan birmatuuf dhabanii sigiga lafa balfi itti gatamu, hiyyeeyyiin keessa jiraatan qarqara Finfinneetti argamutti mudateen dhumaatiin gaddisiisaa irra gahee jira. Har’allee seenaan gaddisiisaan irra deebi’ee raaw’atuun guyyaan gaddaa bifa addaatin kutaa hawaasaa biraarra gahee jira.
Wayta ajjeechaan jumlaa ummata Oromoo fi ummattoota Itoophiyaa biroo irratti humnoota tikaa TPLFn golgaa labsa yeroo hatattamaatin raawwatamaa jiru; weerara dhibee koleeraa furmaata waakkatameen dhumaatiin lammiilee Somaalii Ogaadeen mudataa jiru, ijoollee Gaambeellaa tahe jedhamee humnoota alagaatin ukkaamfamaa fi ajjeefamaa jiran kanatti murna TPLF mootummaadha ofiin jedhu jalatti ummattoonni Itoophiyaa har’as, dhumaatii akkaan gaddisiisaa lubbuu ilmaan biyyaa kurna hedduu galaafateef gadda taa’aa jiru.
Dhaabbileen miseensota Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(TUBD) ummattoota qabsaawaafii jiran bakka bu’uudhaan gadda jabaa itti dhagahame maatiilee balaa suukaneessaa kana mudataniif dabarsu. Yakka raawwatame kanaaf mootummaan yookaan jaarmayaan itti gaafatamu homaatuu akka hin jirre beekkamaa tahus, nuti sirni TPLF balaa dhaqqabe kanaaf akka itti gaafatamu taasisuuf dhiibbaa gochuurraa hin dhaabbannu. Sababa sigiga kosii kanaanis hiyyeeyyiin manneen jireenyaa fi godoon mataa jalatti qabatan awwaalamuurraa lammiileen dhibbootaan lakkaawaman dawoo-dhablee tahaniiru.
Sirni TPLF waa’ee balfa kanaa irratti tarkaanfii furmaataa akka fudhatuuf gorsa ogeeyyii irraa laatameefitti gurra cufatuudhaan lubbuu lammiilee galaafatuutti xiyyeeffate. Waan taheef, sigigi baanamu kan lafa balfi itti gatamu akkaan guddaa tahe magaalaa guddittii Itoophiyaa (Finfinnee/Addis Ababaa)tti Bitootessa 11 bara 2017 galgala mudatee lubbuu namoota 68 ol galaafate kun, dadhabinaa fi xiyyeffaannaa barbaachisu laatuu dhabuu sirna abbaa irree TPLF Itoophiyaa bitaa jiruu irraa tahuu isaaf ragaa guddaa dha. Kanatti dabalee gabaasaaleen akka addeessaa jiranitti, kanneen biroo hedduun eessa-buuteen dhabameera.
Warreen kunis lammiilee murna TPLF/EPRDF’n baroota 26n dabran aangoorra ture keessa dagataman keessaa garii yoo tahan, kanneen balaa kanaan miidhaman biroon ammoo warreen lafti isaanii maqaa invastimantiin jeneraalotaa fi qondaalota TPLF’f laachuuf jecha lafa akaakilee-abaabilee isaanii kan naannawa Finfinneetti(Oromiyaa) argamurraa buqqifamani dha. Lameenifuu itti gaafatamaan mootummaa aangoorra jiru dha.
Nuti, miseensonni Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) tahiinsa akkaan gaddisiisaa fi boqonnaa nama dhoowwatu ka hawaasa cunqurfamoo fi sirna aangoorra jiruun ilaalcha waakkataman irra gahe kanaan gadda nutti dhagahame ibsina. Ummattootni Itoophiyaa haala ulfaataa akkasii keessatti akka harka walqabatanii fi warreen balaa kanaan miidhaman gargaaran waamicha goona.
Sirni aangoorra jiru naannawa magaalaa guddoo kan sirnichi nageenyaa fi jireenya isaaniif odoo hin dhimmin qabeenya isaanii saamaa jirutti, lammiileef tajaajila sadarkaa duraa barbaachisaa tahe laachuu dhabuu isaarraa balaa mudateef balaaleffatamuu qaba.
TUBDn sabootaa fi ummattoonni Itoophiyaa sirna nama-nyaataa kana irratti falmaa finiinsuu dhaan Itoophiyaa keessatti gama hundaan jijjiirama dhugaa argamsiisuuf sirna TPLF fedhii fi bakka bu’ummaa ummataa malee fi maal na dhibdeen baroota 26 dabraniif yakka raawwataa bahe ofirraa kaasuuf akka harka walqabatanii sossohan waamicha dhiyeessa.
Maayiirrattis, mootummaan abbaa irree TPLF lammiilee balaa irra gahurraa ittisuu dadhabuu isaatiif gaafatamuu qaba jenna. Maatii dadhabinaa fi xiyyeeffannaa lachuu dhabuu TPLF irraa lubbuun duraa galaafatamee fi jireenyi isaanii mancaafameef haal-duree tokko malee beenyaa barbaachisu akka kafalu gaafanna. Xiyyeeffannaa waakkatuu TPLF fi duula humnoota sirnichaatin guutummaa biyyattii keessatti warreen lubbuu dhabaniin ekeraan keessan daadhii haa dhugu jenna.
Tumsi Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii hanga haqni ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa guutummaatti dhugoomutti falmaarraa kan hin dhaabbanne tahuus hiree kanaan hubachiisa.
Koree Hoji-raawwachiiftuu Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii
Bitootessa 1, 2017